Vaovao - Ahoana ny fanaovana kofehy masinina ao amin'ny ivon'ny milina?
Ahoana ny fomba hanoratana ny masinina ao amin'ny ivon'ny milina?
Machining kofehy eo afovoan'ny milina dia iray amin'ireo fampiharana lehibe indrindra. Amin'ny dingan'ny fanodinana kofehy, ny kalitao sy ny fahombiazan'ny milina dia misy fiantraikany mivantana amin'ny kalitao sy ny fahombiazan'ny ampahany. Ireto ambany ireto dia hampahafantarinay ny fomba fanodinana ny kofehy izay ampiasaina amin'ny milina tena izy, ary koa ny fisafidianana ireo fitaovana fanaovana milina kofehy, ny fandaharana NC ary ny famakafakana ary ny fanazavana ny fisorohana. Mba hahafahan'ny mpandraharaha misafidy ny fomba fanodinana sahaza azy hanatsarana ny fahombiazan'ny foibe fanodinana.
A.Fampitahana tsotra sy fampitahana manaparitaka henjana
Ao amin'ny ivon-toeram-pivarotana, ny fikikisana ny lavaka nipaipaika dia fomba fanodinana mahazatra, ary mety amin'ny lavaka misy kofehy misy savaivony kely sy marina ny toeran'ny loaka. Izy io dia manana fikitihana mahitsy sy fikitika mafy fomba roa.
Ny fikolokoloana mora, ny paompy dia voahitsakitsaky ny chuck tapping miovaova, ary ny chuck nipaipaika dia azo omena tambiny mba hanonerana ny lesoka fahanana vokatry ny famahanana ny lozisialy ao amin'ilay milina sy ny hafainganam-pandehan'ny fihodinan'ny spindle, ary hiantohana ny feo marina. Ny fikolokoloana mora dia manana ny mampiavaka ny firafitra sarotra, ny vidiny lafo ary ny fahasimbana mora. Ny fikolokoloana henjana, ny lohany amin'ny lohataona henjana indrindra hitazomana ny paompy, ny feed spindle ary ny hafainganam-pandehan'ilay spindle dia mifanaraka amin'ny fitaovan'ny milina, tsotra ny rafitra, mora ny vidiny, ary malalaka kokoa ny fampiharana, izay afaka mampihena tsara ny vidin'ny fitaovana.
Tao anatin'izay taona faramparany, nihatsara tsikelikely ny fahombiazan'ny ivon-toeran'ny milina, ary ny fikirakirana henjana dia nanjary fanamafisana ny foiben-toeran'ny milina, izay fomba lehibe fanodinana kofehy.
B.Fifidianana paompy sy fanodinana ny lavaka ambany misy kofehy
Ny paompy dia mila mifantina arakaraka ny fitaovana fanodinana. Araka ny fitaovana samihafa napetraky ny orinasa fitaovana, dia hisy maodely paompy mifanaraka amin'izany. Faharoa, tandremo ny fahasamihafana misy eo amin'ny paompy lavaka sy ny paompy jamba, ary ny faran'ny fitarihana amin'ny paompy misy lavaka dia lava. Ary ny halalin'ny fikirakirana ny kofehy dia tsy azo antoka, raha ny mason-jamba no milina miaraka amin'ny paompy amin'ny lavaka.
A. Endri-javatra fikosoham-bary
Ny fitotoana kofehy dia midika hoe fampiasana kofehy fikosoham-bary mpikapa hanoto ny kofehy. Ny tombotsoan'ny kofehy fikosoham-bary raha oharina amin'ny paompy dia ny fahatratraran'izy ireo ny fivoahan'ny puce sy ny fampangatsiahana, hisorohana tsara ny olana ara-kalitao toy ny fahaverezan'ny nify sy ny korontana eo am-pikarohana. Mandritra izany fotoana izany, rehefa lehibe ny savaivon'ny kofehy, ny paompy dia ampiasaina amin'ny famolavolana milina, ary ny herin'ny tsiranoka amin'ny milina dia tsy afaka mahafeno ny fepetra takiana. Miaraka amin'ny fikitihan'ny milina fandavahana, ambany ny fahombiazan'ny kofehy, ary lehibe ny hamafin'ilay mpiasa. Ny fizotry ny fikolokoloana kofehy dia afaka mahatsapa ny mampiavaka ny hery kely sy ny fanesorana ny puce tsara, ary manana ny tombony azo avy amin'ny fikirakirana ny kofehy avo sy ny lanjan'ny fahasarotana ambonimbony.
B. Ny fitsipiky ny fikolokoloana kofehy
a. Famolavolana makro fanosotra kofehy
Mandritra ny fanodinana ny lohan'ny varingarina, dia misy lavaka be lolompo mankaleo eo amin'ny sisiny. Talohan'izay dia nampiasaina ny fikolokoloana ny paompy, nahatonga ny hamafin'ny asa, ny fahombiazan'ny fanodinana ambany, ny olana ara-kalitao toy ny fahaverezan'ny nify ary ny fitafiana haingana. Mba hanatsarana ny kalitaon'ny fikirakirana ny kofehy dia ampiasaina amin'ny fametahana ny milina fanenjana kofehy multi-nify, ary ny foibe fametahana marindrano no ampiasaina amin'ny fikarakarana.
b. Fandefasana fikosoham-bary amin'ny fikosoham-bary
Araka ny fandrefesana tena izy, ny halavan'ny ampiasain'ny kofehy fikosoham-nify marobe dia lehibe kokoa noho ny halavan'ny kiran'ny masinina loaka misy kofehy, ary napetraka ny lalan'ny fitaovana. Ity fomba ity dia manome antoka fa ny nify mahomby tsirairay ao amin'ny fanapahana kofehy vita amin'ny kofehy marobe dia mandray anjara amin'ny fanapahana amin'ny fotoana iray, ka mamita haingana ny fizotran'ny kofehy manontolo.
Wuxi mitarika Precision Machinary Co., Ltd. manolotra ny mpanjifa amin'ny habe rehetra feno serivisy fanamboarana vy manokana miaraka amin'ny fizotrany tsy manam-paharoa.
Fotoana fandefasana: Jan-10-2021